Juventus Oo Hogaamineysa Tartanka Loogu Jiro Saxiixa XidigaPaul Pogba Ee Manchester United
HomeWararka CiyaarahaJuventus oo hogaamineysa tartanka loogu jiro saxiixa XidigaPaul Pogba ee Manchester United
October 31, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Kooxda Juventus ayaa lagu soo waramayaa in ay hogaaminayso tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Man United ee Paul Pogba dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Mustaqbalka xiddiga reer France ayaa haatan cirka isku shareeray, iyadoo aan la hubin inuu la sii joogi doono Red Devils iyo inuu u dhaqaaqi doono , iyadoo kooxaha Real Madrid iyo Paris Saint-Germain ay xiiseynayaan saxiixiisa.
Si kastaba ha ahaatee, suurtogalnimada ku soo laabashada Serie A si uu ugu biiro Juventus ayaa noqon karta mustaqbalkiisa maadaama ay yihiin kooxda hogaamineysa tartanka loogu jiro saxiixiisa sida uu qabo Rudy Galetti .
Pogba ayaa lagu soo waramayaa inuusan qandaraaska u cusbooneysiin doonin Manchester United, dib ugu soo laabashada kooxda Talyaaniga ayaa ah qorshaha A ee isaga xilligan.
Si ay taasi u dhacdo, kooxdu waxay u baahan doontaa inay iska iibiso ciyaaryahankii hore ee Arsenal Aaron Ramsey iyo sidoo kale midkood Weston McKennie ama Adrien Rabiot si ay u hesho qandaraas 12 milyan euro ah xilli ciyaareedkii iyo gunnooyin ay ku qaadanayso xiddiga Red Devils.